Simian မှ“ Simian Go!” ၏နောက်ဆုံးထွက် iPhone App ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Simian ထုတ်လုပ်ပြီးက iPhone App ကို "Simian Go ကို!" နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
Simian ထုတ်လုပ်ပြီးက iPhone App ကို "Simian Go ကို!" နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့သဲက iPhone app ကို, ဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်အချိန်တွင်မကနေချက်ချင်းမီဒီယာဖိုင်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုသူများအဖွင့်ခြင်းဖြင့်တဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်တတ်၏။
Laguna Niguel, Calif.â€ "Simian, ဖန်တီးမှု workflow နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ကပင်ပိုမိုလွယ်ကူအသုံးပြုသူများအပြောင်းအရွေ့ပေါ်နေချိန်တွင်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အဘို့အကိုက၎င်း၏သဲက iPhone app ကို Simian Go ကို !, ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ယခု၎င်းတို့၏ iPhone, iOS ကို7device ကိုမှတဆင့်၎င်းတို့၏မီဒီယာစာကြည့်တိုက်အတွက်ဘယ်ဖိုင်မဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Apple ရဲ့ streaming များ protocol ကို Airplay သုံးပြီးအခြားသူများနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ Simian Go ကို! Apple ရဲ့တဆင့်အခမဲ့ download အဖြစ်ရရှိနိုင် အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး.
Simian Simian Go ကိုဖြန့်ချိ! သွားလာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet အပေါ် ပို. ပို. မှီခိုကြောင်းတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြေရှင်းရန်နောက်ဆုံးကျဆုံး။ ဒီ app ကျယ်ပြန့် Simian အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်တိုးအရောင်းမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက် effusive ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။
"Simian Go ကို! အလွန်ကြီးစွာသောရောင်းအားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်! "ပက်ထရစ် Knight ဟာ, post ကိုထုတ်လုပ်သူ, Aero ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဘယ်နေရာကနေမဆို reels ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုသွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အဆက်မပြတ်ခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကြီးရဲ့အလုပ်လုပ်စေသည်။ "
Simian Go ကိုနှင့်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုမီဒီယာစာကြည့်တိုက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိ!
Simian Go ကို! အသုံးပြုသူများအလျှင်ပင်တိုင်းပြည်ထဲကသူတို့ရဲ့မီဒီယာစာကြည့်တိုက်မှချက်ချင်းလက်လှမ်းရှိသည်။ "ဒါဟာတစ် soundstage ကနေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပျက်နေရာတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပေးသည် Los Angeles မြို့ စပိန်အတွက်မြို့သို့မဟုတ်ဘရာဇီးအတွက်ရွာ, "Cortez ညီအစ်ကိုများမီဒီယာ Manager ကိုဂျေဆန် Durdon မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ကျနော်တို့က Simian Go ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပွီ! နှင့်ပြီးသား clients များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမြင်ကြပြီ။ "
Simian Go ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း! အစွမ်းထက် features အသစ်များစွာပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး reel ဖန်တီးအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့မိမိတို့အိုင်ဖုန်းဖိုင်များကို download လုပ်ပါရန်မလိုဘဲမိမိတို့၏ပြည့်စုံမီဒီယာစာကြည့်တိုက် browse နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, မီဒီယာဖိုင်တွေ AirDrop သုံးပြီးအခြားအ IOS ကို devices များထံသို့စလှေတျနိုငျသညျ။ သိမ်းဆည်းထား reels ယခုဖျက်ပစ်နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့် Simian Go ကို! 's ကို search function များအားယခုခေါင်းစဉ်, အမှတ်တံဆိပ် / client ကိုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် / အသက်အကြီးဆုံးနေဖြင့်မီဒီယာ sort ဖို့အသုံးပြုနိုင် option ကိုတစ်ဦး "အားဖြင့်စီ" တို့ပါဝင်သည် reels ကိုစလှေတျနိုငျသညျ။ "Simian Go ကို! သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးထဲမှာ Simian ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောဘရောက်ဇာကို-based လုပ်ဆောင်ချက်ကို၏တန်ခိုးကိုထည့်လေ့မရှိ! "Simian ရဲ့ဘရိုင်ယန် Atton ကပြောပါတယ်။
Simianâ "¢စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအဘို့အစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များကဒီဇိုင်းတစ်ခုအစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသော workflow နှင့် ideation ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူလာမည့်အဆင့်အထိဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြာပါသည်။ Simian ရဲ့်ဖြစ်သော်လည်း, အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပလက်ဖောင်းအစဉ်မပြတ်ဖန်တီးမှုကုမ္ပဏီများအတွက်အွန်လိုင်းမီဒီယာခွဲဝေမှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်။
ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ ထုတ်ကုန်အပ်ဒိတ် ရောင်းအား tools များ Simian 2014-06-30
ယခင်: Visual Effects နှင့် CG များအတွက် Filmworkers မိတ်ဆက် "Churchill ရဲ့စတူဒီယို"
နောက်တစ်ခု: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ '' ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းရေး Telemundo ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့သီချင်းပြိုင်ပွဲ, la Voz ကလေးများများအတွက်ညာမှတ်ချက် Hits